Zvipatara Zvotyora Mutemo neKuramba Zvichibhadharisa Madzimai Akazvitakura
Mamwe madzimai akazvitakura anoti ari kushungurudzwa muzvipatara zvehurumende pamwe nemakirinika vachinzi vabhadhare mari kana voda kubatsirwa zvisinei kuti pane mutemo wekuti vanhukadzi havafanirwe kubhadhara mari muzvipatara izvi pakusungunuka vana.
Izvi zvakabuda pamusangano wakitwa paMpilo Central Hospital nekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai pamwe nevechidiki, wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yekuti vanhukadzi vane nhumbu vanobhadhariswa mari here kana kuti kwete muzvipatara pakusununguka, uyewo kuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana nzira dzekudzivirira nadzo pamuviri zviri nyore here.
Mumwe wemadzimai ange ari pamusangano uyu Muzvare Thembelihle Sibanda, vati vanhukadzi vakawanda kunyanya vanoshaya, vanotadza kubhadhara mari kana vasungunuka uye vanoramba vakachengetedzwa muzvipatara kusvikira vawana mari yavanenge vachinzi vanofanirwa kubhadhara.
Vati vamwe vanopedzisira vaendeswa kumagweta nekuda kwezvikwereti zvavanenge vachinzi vaita pakusungunuka.
Kanzura weWard 8 muBulawayo Amai Sheila Musonda vatsinhirawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai anenge akazvitakura vakatiwo nguva zhinji vanhukadzi vanenge vasina mari yavanonzi vanofanirwa kubhadhara iyi vanobatwa neseri kweruoko naana mukoti.
Panyaya yekuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana zviri nyore here nzira dzekudzivirira nadzo kuita pamuviri muzvipatara zvehurumende kana makiririniki, vamwe vati vanhukadzi vakawanda vanoisa hupenyu hwavo munjodzi nekutsvaga zvekudzivirira pamikoto kana kuti black market, sezvo vasingakwanise kuwana mari yekubhadhara pakudhindisa makadhi inodiwa kuzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki.Izvi zvatsinhirwa Amai Ngoni Budi.
Komiti iyi isati yanzwa kubva kune veruzhinji yatanga yaita musangano nevakuru vakuru vechipatara cheMpilo.
Pakamboratidza kusawarirana pakati paVaLeonard Mabandi vanove mukuru wechipatara cheMpilo naDr Solwayo Ngwenya vanove mukuru wezvekurapa (clinical director) apo vaviri ava vainge vachipindura mibvunzo yekuti madzimai akazvitakura anobhadhariswa mari here kana kuti kwete.
Sachigaro wekomiti yezvemadzimai nevechidiki Amai Pricilla Misihairabwi-Mushonga vakudza vakuru vakuru vechipatara ava kuti havafanirwe kutaura zvegudzira mukanwa asi kuti vataure chokwadi kuti vadare veparamende vagokwanisa kubatsira kugadzirisa matambudziko ari muzvipatara.
Amai Misihairabwi-Mushonga vakaudza Studio 7 kuti vafara kuti vakwanisa kuzvionera pamhuno sefodya pamwe nekuzvinzwira matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzezvehutano.
Pave nenguva zvipatara munyika zvakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana kusakwanisa kuita mabasa azvinotarisirwa kuita nekuda kwekushaya vashandi vakakwana pamwe nemishonga.
Dzimwe nyanzvi dzinoti dambudziko guru inyaya yekuti hurumende haizi kupa bazi rezvehutano mari yakakwana sezvinotarisirwa.